Dirawal (Driver) - Hargeisa, Somaliland - Somali Jobs Inc Dirawal (Driver) - Hargeisa, Somaliland - Somali Jobs Inc
Booska Shaqo: Dirawal (Driver)
Goobta Shaqo: SOS Hargeisa
Wakhtiga Uu Xidhmayo: 17/2/2020
Hay’adda Tuulooyinka Caruurta ee SOS waa hay’ad ka howgalaysay Somaliland tan iyo markii wadanka laga hirgaligaya 2002 waxayna xubin buuxda ka tahay daladda Caalamiga ah ee Tuulooyinka Caruurta SOS ee fadhigeedu yahay Austria. Magaalada Hargeisa, Hay’addu waxay gacanta ku haysaa mashaariic kala gedisan sida Tuulada Caruurt, Kobcinta qoyska, iyo Mashruuca gargaarka dagdaga ah. Hay’adaha Tuulooyinka Caruurta ee SOS waxay ku shaqeeyaan xeerka Qaramada Midoobay ee ku aadan ilaalinta xuquuqda caruurta. Qof kasta oo naga mid ah waxaa saaran masuuliyad uu ku ilaaliyo xuquuqda caruurta kana hortago xadgudubyada ka dhanka ah caruurta nooc kasta oo ay yihiin. Hay’adda Tuulooyinka Caruurta SOS Somaliland waxay soo bandhigaysaa fursad shaqo oo ah Dirawal (Driver) oo ka hawlgala mashaariicda SOS ee Hargeisa.
MAS’UULIYADDA SHAQO OO KOOBAN:
Dirawalku wuxuu u xilsaaranyahay daboolida baahida gaadiid wadida ee SOS Hargeisa. Waxa
masuuliyad culusi ka saaran tahay caruurta, shaqaalaha iyo sumcada Hay’ada ee lagu aaminay. waa inuu ahaadaa shaqsiyad wanaagsan oo ku dayasho mudan, kana soo bixi karta Hawsha loo doortay.
WAAJIBAADKA IYO MAS’UULIYADDA SHAQADA:
a) Waxaa uu qabanayaa baahida gaadiid wadida ee SOS Hargeisa, kolba sida uu u tilmaamo Madaxa xafiiska uu hoostagayo, kaasoo ah qofka masuulka ka ah xidhiidhinta isticmaalka iyo aadsiga gaadiidka xafiiska. Shaqadan waxa ka mid ah inuu qaado shaqaalaha marka ay shaqo tegayaan iyo marka ay soo rawaxayaan.
Wuxuu adeegyo safar ah ugu kala bixi doonaa magaalooyinka Sheikh, Gabiley, Berbera iyo meelaha kale ee looga baahdo hawlaha xafiiska.
Waxaa uu galayaa safaro isagoo had iyo jeer xulanaya jidka ugu dhaw. Waxa uu ka dheeraanayaa socodka aan muhiimka ahayn si uu u yareeyo masaafada la soconayo, shidaalka iyo wakhtigaba. Isticmaalka shakhsi ahaaneed ee baabuurta SOS waana mamnuuc.
Waxa uu ku qorayaa dhamaan safarada uu galo Buuga Dhaqdhaqaaqa Gaadhiga.
Wuxu ku dhaqmi doonaa xeerka nimaadka wado marista Somaliland iyo weliba xeerka anshaxa ee shaqaalaha Ha’yada SOS Children’s Villages Somaliland.
Wuxuu qaban doonaa wixii kale ee maamulka xarunta SOS Hargeisa ka dalbado dirawalka.
SHURUUDAHA LOOGA BAAHANYAHAY QOFKA
Waa in uu haysta Shahaadada dugsiga Sare.
In uu leeyahay khibrad dirawal nimo oo ugu yaraan 6 sano ah. Kana soo shaqeeyey ha’ayada caalami ah.
Waa in uu haystaa liisanka dirawalnimo oo aan dhacsanayn/cashuuran (oo darajada A).
In aaany dadiisu ka waynaan 45 sano
In aanu wax danbi ah hore u galin
Qofka danaynaya shaqadan buuxin kara shuruudaha kor ku xusan, waxaa uu soo dirayaa codsigiisa iyo qoraal koobayaa taariikhdiisa waxbarasho, xirfadiisa shaqo (CV).
Waxaa lagu soo hagaajin karaa emailkan: hr@sos-somaliland.org ama xarumaha ay SOS ku leedahay Hargeisa.